Posted By - Ko Ko - June 28, 2010
Kwon Sang-woo indicted for hit-and-run accident which happened2weeks ago
Kwon Sang-woo booked for hit-and-run
မင်းသား Kwon Sang-woo ကားတိုက်မှု နဲ့ ရဲမှ အရေးယူ ထားတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
မင်းသားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က Seoul မြို့တောင်ပိုင်း မှာ ကိုယ်တိုင် ကားမောင်း သွားနေစဉ် ရပ်ထားတဲ့ ကားတစ်စီး ကိုတိုက်မိ ပါတယ်။
သူဟာ မရပ်ပဲ မောင်းပြေး ရာမှ ကိုက် ၃၀၀ လောက်မှာ မောင်းနေတဲ့ ရဲကား တစ်စီးကို ထပ်မံ တိုက်မိ ပြန် ပါတယ်။
ရဲက ရပ်ရန် လှမ်းအေါ်ပြော နေတဲ့ ကြားမှ ဆက်မောင်း ခဲ့ရာမှာ သစ်ပင် တစ်ပင်နဲ့ တိုက်မိ ပြီးရပ်သွား ပါတယ်။ ထို့နောက် မင်းသားဟာ အဖမ်း မခံပဲ ထွက်ပြေး သွားတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
မင်းသားဟာ နောက် နှစ်ရက် အကြာမှာ ရဲစခန်း မှာလာရောက် သတင်းပို့ ပါတယ်။ ရဲကားက ကျွန်တော့ နောက်လိုက် လာတော့ ကျွန်တော်လည်း ကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ မိပါတယ်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော် အရက်သောက် ထားခြင်း မရှိပါ လို့ မင်းသားက ပြောသွား ပါတယ်။
ရဲက ယာဉ်တိုက်ပြီး ထွက်ပြေး မှုနဲ့ အရေးယူ ထားပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်း မစစ်နိုင် လို့ အရက် သောက် ထားခြင်း ရှိမရှိ ကိုတော့ စစ်ဆေးလို့ မလွယ်တော့ ပါလို့ ရဲက ပြောပါတယ်။
မင်းသားဟာ ယခု ကိစ္စ အတွက် အလွန်မှ နောင်တ ရနေ ပါတယ်လို့ သူ့ရဲ့ agent က ပြောသွား ပါတယ်။
Kwon Sang-woo, Son Tae-yeong come out
to watch the World Cup with their son
Kwon Sang-woo ဟာ Stairway to Heaven (SBS, 2003) ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ နာမည်ကြီး လာခဲ့ သူဖြစ် ပါတယ်။
မြန်မာ ပရိသတ် ကတော့ Sad Love Song (MBC, 2005) [လွမ်းမပြေ] ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ သူ့ကို ပိုပြီး ရင်းနှီး ခဲ့ကြ ပါတယ်။
မကြာမှီ က မင်းသမီး Son Tae-yeong နဲ့ ဟိုးလေး တစ်ကျော် လက်ထပ် ခဲ့ပြီး သားယောက်ျား လေး တစ်ဦး ထွန်ကား ခဲ့ ပါတယ်။
လောလောဆယ် မင်းသားဟာ 71-Into the Fire လို့အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ကားတစ်ကား ကို ရိုက်ကူးနေ ပါတယ်။
Summary - Actor Kwon Sang-woo was booked for an alleged hit-and-run. The star went to the police station two days after the accident. Kwon was driving in southern Seoul early in the morning of June 12 and hitaparked car. He did not stop, but tried to flee the scene only to hit another car- this timeapatrol car. He drove forafurther 300 meters, ignoring orders from the police to stop, then hitatree. He left his car and ran off. Kwon showed up on June 14 at the Gangnam Police Station. Since two days had passed, the investigators were unable to conductasobriety test. The actor denied driving under the influence of alcohol and the case was passed to the prosecution on fleeing the scene of an accident charges only. His agency said, the actor was deeply remorseful of his conducts. Kwons car skidded in the rain and hitacar parked nearby. He was trying to reverse to look at the damage but made matters worse by hittingapatrol car. But when he hit the trees, he panicked and left the scene - his agency added.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/493/actor-kwon-sang-woo-booked-for-hit-and-run
Hot News-20 June 2010
Posted By - Ko Ko - June 21, 2010
F4 မင်းသမီး Koo Hye-seon ဟာ တကိုယ်တော် ပန်းချီ ပြပွဲ လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေ ပါတယ်။ ဝတ္ထု တစ်အုပ်လည်း မကြာမှီ ထွက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒီအတွင်း မှာ သူ့ရဲ့ သီချင်း album တစ်ခု ထွက်လာ ပါတယ်။ ဒီ albun မှား ဂျပန် သရုပ်ဆောင် Isao Sasaki နဲ့တွဲပြီး ကိုယ်တိုင် တေးသရုပ်ဖေါ် ထားပါတယ်။
ထို့ပြင် ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ လုပ်ထားတဲ့ Magic အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် ကားတို (a short feature film) ကို 11th Jeonju International Film Festival မှာ တင်ဆက် ခဲ့တယ်လို့ လည်း သိရ ပါတယ်။
Source : Koo's feature debut is more spoof than ' Magic '
Rain (27) နဲ့ မင်းသမီး Jun Ji-hyun (28) တို့ date လုပ်နေ ကြပြီး ဆိုတဲ့ သတင်း တွေထွက် နေပါတယ်။
မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး တို့ရဲ့ agency နှစ်ခု စလုံး ကတော့ ဒီသတင်း မမှန် ပါလို့ ငြင်းဆို ထားပါတယ်၊ မဟုတ် မမှန် သတင်းလွှင့် သူတွေကို တရားစွဲမယ် လို့လည်း ခြိမ်းချောက် ထားပါတယ်။
Source : Rain, Jeon deny relationship rumors, threaten legal action
Park Jae-bum ပြန်လာပြီး
2PM တီးဝိုင်း အဖွဲ့က လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လ လောက်က နှုတ်ထွက် သွားတဲ့ Jae Bum ဟာ Hype Nation လို့အမည် ပေးထားတဲ့ ဟောလီဝုဒ် ရုပ်ရှင် ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း တွေရိုက်ဖို့ ကိုးရီးယား ကိုပြန်ရောက် လာပါတယ်။
သူ့ကို JYP ကထုတ်ပစ် လိုက်တာပါ။ အခုတော့ JYP ထက်ကြီးတဲ့ USA ကုပ္မဏီ ကြီး တစ်ခု အတွက် ရုပ်ရှင် ရိုက်ဖို့ ခေါင်းမေါ့ပြီး ပြန်လာ ခဲ့နိုင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Female lead cast for Park Jae-beom film
With comeback in sight, Jae-bum reveals feelings
Lee Na-young to star in TV series "Fugitive" with Rain
Lee Na-young မင်းသား Rain နှင့်ဇာတ်လမ်တွဲရိုက်မည်
မင်းသမီး Lee Na-young ဟာ အဆိုတော် မင်းသား Rain နဲ့တွဲပြီး Fugitive လို့အမည် ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်တော့ မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Lee Na-young ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် က Ireland (MBC) ဇာတ်လမ်းတွဲ ကိုနောက်ဆုံး ရိုက်ခဲ့ပြီး၊ Rain ဟာလည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်က A Love to Kill (SBS) ဇာတ်လမ်းတွဲ ကိုနောက်ဆုံး ရိုက်ခဲ့ ပါတယ်။
ပြဇာတ်မင်းသားလုပ်တော့မည့် Jumong မင်းသား
Jumong မင်းသား Song Il-gook ဟာ I Am You လို့အမည် ပေးထားတဲ့ ပြဇာတ်မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ပြဇာတ် ဆိုတော့ မင်းသားကို အားရပါးရ အရှင်လတ်လတ် ကြည့်နိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Star actor cast in new Ahn Jung-geun play
Ko Hyeon-jeong: 'Fans Are Reliable Because They Trust Me'
မင်းသမီး Ko Hyeon-jeong ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခြင်း
မင်းသမီး Ko Hyeon-jeong ဟာ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့က ဆိုလ်းပြို့ Yeongduengpo Time Square ရှိ CGV Art Hall မှာ fan meet ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင် သက် ၂၁ နှစ်အတွင်းမှာ ပထမ ဆုံးပြုလုပ်တဲ့ fan meet လည်းဖြစ် ပါတယ်။
Source : Ko Hyeon-jeong: 'Fans Are Reliable Because They Trust Me'
Lee Dong-geon enters military Korean military
Lee Dong-geon စစ်ထဲဝင်ပြီး
မင်းသား Lee Dong-geon ဟာ ကိုးရီးယား အမျိုးသား တိုင်းရဲ့ ၂နှစ် စစ်မှုထမ်း တာဝန်ဖြင့် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က စစ်ထဲ ဝင်သွားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Dong-geon enters military Korean military
Jae-bum နှင့် အဆိုတော် T-ae တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မည်
အဆိုတော် Jae-bum ပါဝင်မဲ့ Hype Nation ရုပ်ရှင်မှာ RaNia အဆို အဖွဲ့မှ အဆိုတော် T-ae မှ မင်းသမီး အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သီရ ပါတယ်။
Source : Female lead cast for Park Jae-beom film
Kim Seon-ah meets with 2,000 fans at Taiwan fan meeting
Kim Seon-ah ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခြင်း
မင်းသမီး Kim Seon-ah ဟာ ဇွန်လ ၁၂ ရကိနေ့က Taiwan မှာ fan meet ပြုလုပ် ပါတယ်။ Fans ၂၀၀၀ ကျော်တက်ရောက် ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Kim Seon-ah ဟာ My Name is Kim Sam-soon (2005) အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲနဲ့ နာမည် ကြီးလာတဲ့ မင်းသမီး ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Kim Seon-ah meets with 2,000 fans at Taiwan fan meeting
Koo Hye-seon to release digital single on June 16
Koo Hye-seon သီချင်းခွေထုတ်ခြင်း
မင်းသမီး Koo Hye-seon ဟာ မကြာမှီက Brown Hair လို့ အမည်ရှိတဲ့ digital single သီချင်းခွေ တစ်ခွေ ထုတ်ဝေခဲ့ ပါတယ်။
သီချင်းရော စာသားပါ၊ Koo Hye-seon ကိုယ်တိုင် ရေးသား ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင် သီဆိုထား ပါတယ်။
Source : Koo Hye-seon to release digital single on June 16
Greece နဲ့ ကိုးရီးယား ဘောလုံး ပွဲမှာ၊ ကိုးရီးယား ပရီသတ် ထဲမှ အမျိုးသမီးလေး တစ်ဦးရဲ့ ပုံကို internet ထဲမှာ post လုပ်ပြီး နောက်မှာ တော်တော် နာမည်ကြီး လာပါတယ်။ ဘယ်သူ များလဲလို့ လည်း စုံစမ်း လာကြ ပါတယ်။
ဒီမိန်းခလေးဟာ ကိုးရီးယား သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး Song Si-yeon ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ သူ့ကို Cheer Girl against Greece လို့အမည် ပေးထား ပါတယ်။
Source : 'Cheer Girl against Greece' identified as actress Song Si-yeon
Koo Hye-seon's short feature wins at Japan film fest
Koo Hye-seon ဒါရိုက်တာဆုရခြင်း
တိုကျို မြို့မှာ ကျင်းပ ခဲ့တဲ့ 12th Short Shorts Film Festival & Asia မှာ F4 မင်းသမီး Koo Hye-seon ဟာ သူ ဒါရိုက်တာ လုပ်ရိုက် ထားတဲ့ The Madonna တဲ့ ဇာတ်လမ်းတို ကို တင်ဆက် ရှင်ပြိုင် ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင် ကားတို အတွက် Spotlight Award လို့ အမည် ရှိတဲ့ ဆုကို ဆွပ်ခူး ရရှိခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Koo Hye-seon's short feature wins at Japan film fest
The Servant ရုပိရှင် Box Office 1# ရရှိခြင်း
မင်းသမီး Jo Yeo-jeong ရဲ့ The Servant အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ 1# နေရာကို ၂ ပါတ် ဆက်တိုက် ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ Sex အခန်း တွေတော့ တော်တော် များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Source : "The Servant" holds onto No. 1 spot on Korean box office
Lee Joon-ki in the military!
စစ်သားကြီး Lee Joon-ki
မင်းသား Lee Joon-ki ဟာ မကြာမှီက အခြေခံ စစ်သင်တန်း ၅ ပတ် ပြီးဆုံးသွား ပါတယ်။ ယခု စစ်တပ်ရဲ့ အနုပညာ ဋ္ဌာန တစ်ခုမှာ အရာရှိ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Lee Joon-ki to serve as celebrity military officer
Girls' Generation ပထမဦဆုံးဂျပန် Show ပွဲ
Girls' Generation အဆို အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဦဆုံးဂျပန် Show ပွဲကို ပရိသတ် တစ်သောင်း ကျော်ဆံ့တဲ့ Ariake Coliseum in Tokyo, Japan မှာ လာမည့် သြဂုတ်လ ၂၅ရကိ မှာကျင်းပ ပြုလုပ် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Girls' Generation to debut in Japan
အဆိုတော် Yoona နဲ့ဆုံရလို့မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့မင်းသမီး
F4 မင်းသမီး Koo Hye-seon ဟာ အဆိုတော် Yoona ကိုအလွန် သဘောကျတဲ့ fan တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
KBS2 TV ရဲ့ Win Win အမည်ရှိတဲ့ celebrity talk show မှာ မထင်မှတ်ပဲ ရောက်လာတဲ့ အဆိုတော် Yoona ကိုဆုံရတဲ့ အတွက် Koo Hye-seon ဟာ မျက်ရည် များတောင် ကျခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Koo Hye-seon cries happy tears upon meeting Yoona
အဆိုတော် Hwang Hye-yeong ဟာ အသက် ၃၇နှစ် ရှိပါပြီး။ Shopping mall တစ်ခုရဲ့ ပိုစတာ တွေမှာ bikinis နဲ့ မယုံနိုင် လောက်အောင် နုပျိုတဲ့ အသွင်နဲ့ တွေ့ကြ ရလို့ အများမှ ရင်သတ် ရှုမော ဖြစ်နေ ကြပါတယ်။
Source : Hye-yeong, too sexy for her age of 37 years?
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/492/hot-news-20-june-2010
Posted By - Ko Ko - June 14, 2010
Rain nominated as 'Biggest Badass Star'
Rain will be entering the military service withinayear
Rain MTV ဆုရခြင်း
Rain after receiving MTV award
ကိုးရီးယား မင်းသား Rain ဟာ ကမ္ဘာကျော် MTV ဆုကို မကြာမှီက ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ Rain ဟာ ဒီဆုကို ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပထမ ဦးဆုံး ကိုးရီးယား သရုပ်ဆောင် လည်းဖြစ် ပါတယ်။
ရွေးချယ်ခံ nominee စာရင်း ကို ဟောလီးဝုဒ် မှ producers နဲ့ executives များမှ ပဏာမ စာရင်း ပြုစုပြီး၊ online မှာ ပရိသတ် များပှ မဲပေးပြီးး ဇကာတင် ရွေးချယ် ကြပါတယ်။
ဆုပေးပွဲ ကို Los Angeles မြို့မှာ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့က ကျင်းပ ခဲ့ပြီး၊ ဆုလက်ခံ ပြီးတဲ့ နောက်မှာ Rain ဟာ ကျေးဇူးတင် စကားကို အင်္ဂလိပ် လို ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
Rain in Hollywood film Ninja Assassin
Rain ဆုရတာ က Biggest Badass Star ဆိုတဲ့ category မှာဖြစ် ပါတယ်။ မင်းသားဟာ ဟောလီးဝုဒ် နာမည်ကြီး များဖြစ်ကြ တဲ့ Angelina Jolie, Channing Tatum, Chris Pine နဲ့ Sam Worthington စသူ တို့ကို ကျော်တက်ပြီး ဒီဆုကို ရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၇နှစ် ရှိပြီး ဖြစ်တဲ့ Rain ကို USA မှာ Ninja Assassin အမည် ရှိတဲံ action ရုပ်ရှင် ပြပြီးတဲ့ နောက်မှာ တော်တော် လူသိများ လာကြ ပါတယ်။ ယခု ရတဲ့ ဆုဟာလည်း Ninja Assassin ရုပ်ရှင် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Rain postponed entering military service
Rain ၏ အခြား သတင်းများ ကတော့ ၂နှစ် စစ်မှု ထမ်းခြင်း တာဝန်ကို ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ လိုက်ခြင်း နဲ့ Fugitive လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ် တစ်ခုကို မင်းသမီး Lee Na-young နဲ့ တွဲပြီး မကြာမှီ ရိုက်တော့ မယ် ဆိုတာ တို့ပဲဖြစ် ပါတယ်။
နောက်ဆုံး hot ဖြစ်နေတဲ့ သတင်း ကတော့ Rain (27) နဲ့ မင်းသမီး Jun Ji-hyun (28) တို့ date လုပ်နေ ကြပြီး ဆိုတဲ့ သတင်း ပါပဲ။
မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး တို့ရဲ့ agency နှစ်ခု စလုံး ကတော့ ဒီသတင်း မမှန် ပါလို့ ငြင်းဆို ထားပါတယ်၊ စောင့်တော့ ကြည့်ကြ ရဦး မှာပါပဲ။
Summary - Korean star Rain was Sunday crowned Biggest Badass Star at the 2010 MTV Movie Awards for his role in [Ninja Assassin.] The 27-year-old beat Hollywood A-list candidates such as Angelina Jolie, Channing Tatum and Sam Worthington for the award, which goes toanotable performance in an action movie. He is the first Korean to be recognized at the MTV Movie Awards. There are only four past recipients of the Badass prize who are Asian such as Jackie Chan, Zhang Zi-yi, Lucy Liu and Chiaki Kuriyama.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/491/mtv-names-rain-biggest-badass-star
20 comments submit comments
5 comments submit comments
Rendering time 0.0081 sec **
9301480a05d5e4f1d0ccdfab6be45ec6 - January 22, 2018 - 2:06:26 am